Akathethelelwe uSthandwa uma onile | IOL Isolezwe
Akathethelelwe uSthandwa uma onile
Isolezwe / 29 May 2012, 11:16am /
U STHANDWA Nzuza uthi ubengazi ukuthi useyakhishwa ohlelweni lwasebusuku
LUTHANDA ukuba yinkinga udaba lukaSthandwa Nzuza kuKhozi FM, futhi luze lungikhumbuze isigaba engisithandayo ohlelweni lukaLinda Sibiya okuthiwa kulona Sifelani.
Ngiyazibuza namanje ukuthi ifelani le ntokazi enekhono elingaka oKhozini kodwa okucacayo wukuthi iziphathimandla zalo msakazo aziyingeni indaba yayo.
Ngonyaka odlule kushintshwa izinhlelo oKhozini le ntokazi ike yaphenduka undinga sithebeni njengoba yayingenalo ohlelo lwayo.
Ngenhlanhla kodwa umphathi wezinhlelo wabuye wayinika uhlelo lwangempelasonto.
Okubuhlungu-ke kodwa ngukungena ihora noma amahora amabili emsakazweni kanye ngezimpelasonto, ekubeni abasakazi abaningi behola ngokusebenza kwabo.
Le ntokazi inomfutho, isakaza kahle, ixhumana ngendlela nabalaleli futhi isencane nokuyibeka ethubeni lokuba nekusasa eliqhakazile. Yikhona lokhu okungenza ukuthi ngibe nemibuzo engenazimpendulo yokuthi kanti ngempela uSthandwa wenzani kubani kanti lowo muntu akasaxoli yini?
Akekho ongazi ukuthi bayashoda abantu besifazane emsakazweni kodwa nangu sinaye uvaleleka ngaphandle.
Thina njengabalaleli kunezinto esingazazi ezenzeka ngale kokwazi kwethu, lokhu kusishiya siqagela, sizibuza ukuthi konakelephi, yisiphi isono sale ngane ebukeka imsulwa.
Ngiyazi akuphoqelekile ukuthi uma umsakazi wesifazane engekho kusho ukuthi kumele abanjelwe ngomunye wesifazane kodwa ngike ngalalela uhlelo lukaMroza Buthelezi, ubengekho ngaxakeka nje ukuthi kungani kungafakwanga le ntokazi ngoba ngokwami ikulona izinga likaMroza.
Ngisho ukuthi nawe njengomphathi wezinhlelo uzama ngakho konke ukuthi abalaleli bohlelo bangakuzweli ukungabi khona komsakazi wohlelo, uSthandwa uthi akagijime ngendlela efanayo noMroza, kodwa ngesikhathi engekho uMroza kuvele kwalandwa owesilisa.
Njengoba ngisho nje ziningi izinto ezenzeka emsakazweni nezinqumo ezikushiya ucabanga ukuthi engabe kwenzenjani manje.
USthandwa ugila izimanga kodwa kuvele kube sengathi ukhona lo muntu amnyathela ikhona oKhozini FM.
Phela uma ungumuntu wenza amaphutha kwesinye isikhathi ungazi ukuthi sewenza wona.
Okunye okungase kwenzeke yisihlava sabantu abangakwazi noma abahlulekayo ukuhlukanisa phakathi komsebenzi nezindaba zangasese.
Anginaso isiqiniseko sokuthi uSthandwa uyisisulu salokho yini njengoba bese ngike ngasho nginemibuzo engenazo izimpendulo.
Ngabe asibenzi ubulungiswa uma singazibuzi ngokwenzeka kuSthandwa, ikakhulu thina njengababhali balezi zingosi. Thina sithi akathethelelwe uSthandwa, akekho umuntu ongalenzi iphutha. Inekhono le ngane, ayinikezwe ithuba elifanele kulo msakazo.
Ayikho into ebuhlungu njengokuthi thina njengabalaleli siyalizwa igalelo lale ntokazi kodwa kuyacaca ukuthi kunokuningi okwenzeka ngaphandle komoya okugcina kusiphazamisa thina njengabalaleli.
Bengizothi mhlawumbe le ntokazi ayinabo ubuhlakani obudingekayo kodwa bakhona nje abadidiyeli bezinhlelo okuyibona abayizinjini zezinhlelo, kungani yona ingatholelwa umdidiyeli.
Le ntokazi ike yafakwa kwinhlolokhono ngesikhathi kudingeka umsakazi ekubeni laziwa igalelo layo yagcina ingaphumelelanga. Kodwa singathini ngoba kwenzeka lokhu nje, abantu banazo zonke izimpendulo njengokuthi nje bakutshela ukuthi isikhala somsebenzi sikhishwa ngaphakathi uma umuntu engatholakali kuyiwe ngaphandle.